Solve the Drive won't Work on Windows | BLOG OS-DUKAANKA
Use the troubleshooting instructions below if you install CD, DVD ama drive Blu-ray ma awoodo in uu akhriyo wixii cajaladood ama aan awoodin in ay aqoonsadaan kasta oo cajaladood.
tilmaamaha ayaa kaa caawin doona in aad xalliso dhibaatada mararka qaarkood haddii drive ayaa si buuxda kama baaqan. tilmaamaha hoos ku qoran waxaa loo isticmaali karaa labada gudaha iyo dibadda CD, DVD ama Blu-ray drives laakiin qaar ka mid ah asaaska ah waxaa laga yaabaa in wax yar oo kala duwan ah. Iyadoo arrinta CD-ROM aan shaqayn noqon kartaa niyad isticmaalayaasha, waxay keeni kartaa lumis ah ee xogta, carqaladeeyo nidaamka shaqada ee caadiga ah, iyo wixii la mid ah. aqoonta in ay ka gudbaan qaladka CD-ROM aan shaqayn waa waxtar haddii qof uu rabo inuu xaliyo qaladka in gabi ahaanba wax waqti ah. In article la siiyey, waxaan fiirin doono xal badan si ay u xalliyaan arrinta CD-Drive aan shaqayn.
Part 1: Isticmaalka Hardware iyo Qalabka Troubleshooter >>>
Tani waa habka aasaasiga ah in laga takhaluso dhibaato ah ee CD-Drive aan shaqayn. Iyadoo dhowr talaabo oo sahlan in la raaco, dadka isticmaala waxay yeelan karaan DVD iyo CD-ROM aqoonsan by nidaamka. Waa kuwan tallaabooyinku:
Taabo muhiimka ah Windows + R in la furo sanduuq Run ku hadal.
In Panel Control ah, heli sanduuqa raadinta, iyo nooca 'Troubleshooter', iyo ka dibna taabo on 'Dhibaatooyinka'.
Aad leedahay si aad guji 'qalab reserved' in ka hooseeya Hardware iyo Sound Item waxaa ku qoran. Users laga yaabaa in dhalisay in aan ku qor in passwords ay xaqiijin.
Haddii ay taasi ma lagu xalliyo qaladka, aad u guurto karaa in xalka soo socda.
Part 2: Sababta ugu badan ee aad digsi ka maqan >>>
Si ka duwan drive adag in maraakiibta la computer off-the-shelf ah ama drive dibadda, drives adag oo dheeraad ah waxaad iibsan waxaa had iyo jeer ma geeyey formatted oo diyaar u ah inay isticmaalaan. halkii, ay tahay in gobolka-ka fikrad gebi bannaan waa in user dhamaadka samayn doonaa waxa ay rabaan la drive, sidaa darteed waxaa jirta faa'iido u lahayn in ay preformatting ama haddii kale la beddelo drive ka Warshadda. sida oo kale, marka aad gelin drive ee nidaamka, Windows si fudud suga si aad u go'aansato waxa la sameeyo la drive halkii si toos ah formatting iyo waxa ku daray liiska drive.
Step 1: Riix Start > Run. Nooca in ” sysdm.Drich ” sanduuqa wada hadal in ay muujinaysaa. Guji okay waana in aad keenaan a “Guryaha System” sanduuqa wada hadal.
Step 2: Tag tab ah “hardware” oo guji “Manager Device” mar waxaa ay helaan darawalnimada. Mine la odhan jiray “drives DVD / CD-ROM.” waxaa Double-riix si aad u tusto jira oo waa inuu jiraa qalab kale oo iyada ka hooseeyey. Mine sumadda su'aal laakiin mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin dhibic la yaabka ah ee soo socota si ay magaca. Mine la odhan jiray “AOPEN DUW1608 / Aar oo” laakiin haddii aad waa kala duwan, waa caadi.
Step 3: Double-riix hardware cusub ayaa shaaca ka qaaday “AOPEN DUW1608 / Aar oo” waana u gaar ah sanduuqa wada hadal ka muuqan doontaa. Tag ah “Driver” tab iyo xusho “update Driver…” ka badhamada hoose.
Step 4: Hadda, dooro “Ku rakib ka mid ah liiska ama meel gaar ah” oo guji Next. In sanduuqa ku xiga dooro “Ha raadin. Anna waxaan dooran doonaa darawalka si loo soo dajiyo” iyo mar kale, guji soo socda. sanduuqa A kala duwan la hardware socon waayo darawalnimada tusi doonaa. Waxaan ka hoose ee la doortay Mu'minaadka ah, waxay ahayd ugu dambeeyey, waxaa la odhan jiray “CD-ROM Drive [goobaha IMAPI 1,5].” Guji soo socda oo ku dhameysan tilmaamaha waxa uu ku siinayaa.
Part 3: Malaha waxaa keena DVD ah oo khaldan >>>
Riix tab hardware
Guji Tababaraha qalab
OE ALMAATA / ATAA dariiqada xakamaysada double click bixisaa channel
Riix ah tab meel sare
Device 0 ama 1 waa in aalladda qabaan (ma POI) xawaaraha kala iibsiga hadda waa in ay ahaataa aalladda qabaan
(haddii aan) uninstall drive qalab iyo drive DVD (in aan kiiska, waxay ahayd Pioneer drive) – reboot computer si ay dib ugu – mar computer reboot meeleeyey mar kale – celiyaan 1 – 7 mar kale in labada goobaha dib ugu waa aalladda iyo dhibaatada waa go'an.
Part4: Beddelidda drive indhaha diro warqad >>>
by default, oo dhan versions of Windows u yeelaan drive ah indhaha warqad drive la heli karo ee soo socda ka dib markii kuwa wax muda degaanka. Haddii aad markii danbe loo soo dajiyo ah disk adag oo dheeraad ah ama repartition aad drive si ay u abuuraan Muga dheeraad ah, warqad loo qoondeeyey drive ee indhaha laga yaabaa in la beddelo, kaas oo iskaga qasnee laga yaabaa in software rakibay in isku dayaysa in ay helaan drive ee indhaha sida warqad hore.
Waxaad looga kartaa “kuraasta muusikada” beddelidda waraaqaha drive indhaha by gacanta u xilsaarayo drive ee indhaha warqad drive in uu ka badan yahay warqad drive kasta mugga maxaliga ah ama network jira ah. Howl warqad drive la heli karo ee ugu sareeya, Iyadoo, si drive ee indhaha ka hortagtaa Windows ka weligiisba ku beddelaan warqadda drive in. Haddii aad leedahay laba drives indhaha, iyaga u yeelaan Z: iyo Y:. Si aad u xilsaartaa warqad drive kala duwan si ay drive ee indhaha ee Windows XP, sii wadi sida soo socota:
qaab Management Computer eryi diro warqad
1. Laga soo bilaabo Control Panel, dooran Tools Administrative > Management computer.
2. Ballaariyo geedka haddii loo baahdo si ay u muujiyaan waxyaabaha laanta Kaydinta ah.
3. Guji Management digsi, iyo aad u hesho drive indhaha ku Murayaad hoose-xaq u.
4. Xuquuqda-riix drive icon indhaha si ay u soo bandhigaan menu macnaha-xasaasi ah, iyo dooran Change Drive Letter iyo waddooyinka item menu in uu soo bandhigo Drive Letter Change iyo wada hadal iyo waddooyinka ah.
5. Riix badhanka Change oo isticmaal liiska hoos-hoos ah inuu ku meeleeyo warqad drive la heli karo si drive ee indhaha.
6. Save isbedel aad iyo ka bixitaanka. Marka aad aqbasho in isbedelka la soo, Warqad drive cusub dhaqan isla markiiba.
FAR Drive muusikada
Haddii aad bedesho shaqo warqad drive ee drive ah indhaha, sidaas yeel isla markiiba ka dib markii ay ku rakibidda drive ama nidaamka qalliinka. Haddii aad isticmaasho drive in ay warqad asalka ah si loo soo dajiyo software, software in ka dib isku dayi doonaa si ay u helaan drive la isticmaalayo warqadda drive jir.
reer Aateer in, darawalka waa in lagu ganaax shaqada. Hel Macluumaad dheeraad ah, Riix Halkan
Qodobka Select CategoryDriver(195) 3G / 4G Device (40) Codsiga(5) Card TV(17) Card Video(20) Device wireless(113)OS-DUKAANKA(232) Life(92) News(33) kale(44) dalacaad(33) Technology(58) buugga User(6)Taageerada OSGEAR(15) Networks(5) kaydinta(10)Products(589) 3G & kaarka wireless(16) Apple iPhone iPad iPod(18) camera & Qaybo(10) Computer(115) processor processor(157) Electronics(13) IC chipset(2) Telefoonka gacanta(248) Products Security(12) PC kiniin(40)
Intel 64-Windows yara Samsung Model Device Technology_Internet Software Ujeeddo Dadweynaha Taageerada Driver Taxanaha HTC Technology taageero darawalka Tababaraha qalab Nokia Graphics HD processor Telefoonka gacanta Processor processor OS-DUKAANKA fasiraad sharci ah